एनसीसी बैंकको नाफा साढे ५% घट्यो
वैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स (एनसीसी) बैंकको नाफा गत वर्र्ष भन्दा यस वर्ष ५ दशमलव ५५ प्रतिशत घटेको छ ।
कम्पनीले बुधवार सार्वजनिक चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरण अनुसार यस वर्ष कम्पनीले रू. १ अर्ब १० करोड ११ लाख ८० हजार खुद नाफा गरेको हो । यो नाफा गत वर्ष यस अवधिसम्म रू. १ अर्ब १६ करोड ५८ लाख ८५ हजार थियो ।
कम्पनीको सञ्चालन नाफा यस वर्ष ५ दशमलव ६२ प्रतिशत कम रू. १ अर्ब ५५ करोड १९ लाख ७८ हजार भएको छ । तेस्रो त्रैमाससम्म कम्पनीको वितरणयोग्य नाफा भने रू. ८७ करोड ९३ लाख ९४ हजार छ । गत वर्ष यो नाफा रू. ३० करोड ५३ लाख २९ हजार मात्र थियो ।
१० दशमलव २७ प्रतिशत बोनस शेयर यस वर्र्ष वितरण गरेको कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. १० अर्ब ३१ करोड ४५ लाख १६ हजार पुगेको छ । जगेडा कोष रकम ३ दशमलव ६९ प्रतिशत बढी रू. ३ अर्ब ९४ करोड ७७ लाख ४८ हजार कायम भएको छ ।
यस वर्ष कम्पनीले ३९ दशमलव ८३ प्रतिशतले बढाएर रू. १ खर्ब १ अर्ब ८१ करोड ९१ लाख १० हजार निक्षेप संकलन गरेको छ भने ३६ दशमलव २५ प्रतिशत बढी रू. ८८ अर्ब ५९ करोड १५ लाख २ हजार कर्जा प्रवाह गरेको छ ।
निष्क्रिय कर्जा २ दशमलव ७५ प्रतिशतदेखि घटेर २ दशमलव शून्य ५ प्रतिशतमा झरेको कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी रू. १४ दशमलव २३ रहेको छ ।